Beesha caalamka oo walaac xooggan ka muujisay musuqmaasuq iyo cagajuglayn lagu hayo geedi-socodka doorashada Soomaaliya iyo dib u dhaca u codaynta kuraasta Aqalka Hoose | UNSOM
18:19 - 29 Mar
“Hanaanka doorashada wuxuu ku dhowyahay inuu gaaro marxalad xasaasi ah. Dadka Soomaaliyeed waxay haystaan fursad ay ku xaqiiqsadaan inay keeni karaan isbedel siyaasadeed oo nabad ah sharcina ah,” ayuu yiri Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee QM u qaabilsan Soomaaliya, Michael Keating. “In arrintan guul laga gaaro waxay Soomaaliya u saamaxaysaa inay gasho marxalad cusub oo taariikhdeeda ah, muwaadiniinteedana u keento faa’iidooyin la taaban karo. Laakiin dib u dhac sii socda oo ku yimaada codeynta iyo warbixinada ka soo baxaya musuq maasuq iyo cagajugleyn ayaa hadda su’aalo dhab ah ka keenaya hufanaanta iyo kalsoonida lagu qabo hanaanka. Waa in mas’uuliyiinta siyaasadeed iyo kuwa amni ee ay arrintu khuseyso ay tallaabooyin degdeg ah oo wax ku ool ah qaadaan si loo soo afmeero cagajugleynta iyo kadeedidda dadka noqonaya musharaxiinta, ergada iyo mas’uuliyiinta doorashada loona joojiyo isku dayga in codka laaluush lagu iibsado. Diyaargarowga loogu jiro codeynta/doorashada Aqalka Hoosena waa in la dedejiyaa ".
 Guddiga madaxa banaan ee xalinta khilaafaadka oo qabtay in ka badan kun iyo labo boqol oo dacwo maanta
 Samiira Xuseen Ducaale oo u ololeyneysa xuquuqda haweenka Soomaaliyeed